အတွေးလွန်တဲ့စိတ်ကနေဘယ်လိုရုန်းထွက်မလဲ - Chelmo News Portal
By Pwint Thit Tin Maw
တစ်ချို့သော သူတွေက သူတို့ မနေ့က လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားကို ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်တွေးပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် စိတ်ရဲ့ အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ လှောင်ပိတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို သူတို့ရဲ့ မှတ်ဉာဏ်ထဲကနေ မေ့ပျောက်သွားဖို့မတတ်စွမ်းနိုင်ခြင်း ကလည်း သူတို့ကို အမြဲတမ်း စိတ်သောက ရောက်နေစေပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်၊ အမှားတွေနဲ့ ပြဿနာတွေ အပေါ် ထပ်တလဲလဲ တွေးပြီး စိတ်ထိခိုက်နေခြင်းက စိတ်ကျန်းမာရေး ပြဿနာကို ပိုမို မြင့်တက်စေကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
ကဲ… ဒါဆို Overthinking ဘယ်လို ရပ်တန့်ရမလဲ
(၁) ဘယ်အရာကိုမဆို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှုမြင်ပါ
ဘဝမှာသေးငယ်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို အလွန်အမင်း တွေးတောခြင်းက ဘဝထောင်ချောက်ထဲမှာ ပိတ်မိဖို့ လမ်းစ ဖြစ်တယ်။ သင်တစ်ခုခုကို တွေးတော့မယ်ဆိုရင် သင့်ကိုယ်သင် ပြန်လည်မေးမြန်းပါ။ ငါတွေးနေတဲ့ ကိစ္စရပ်က နောက် ၅နှစ်ကြာရင် ဖြစ်ဦးမှာလား၊ နောက် ၅ ပတ်အတွင်းမှာရော ဖြစ်မှာလား စသဖြင့်တွေးတောကြည့်ပါ။ ဒီလို ရိုးရှင်းတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို မေးမြန်းခြင်းက သင့်အတွေးအမြင် ရှုထောင့်ကို ကျယ်စေပြီး အတွေးလွန်ခြင်းက လွတ်မြောက်စေနိုင်ပါတယ်။
(၂) တိုတောင်းတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ
သင်က ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာ အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ် ဆိုရင် အချိန်တစ်ခု ကန့်သတ်ထားပါ။ အချိန်မကန့်သတ်ထားဘူးဆိုရင် သင့်အတွေးတွေက လွန်ပြီး ကြီးမားသွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ဒါက ငါ့အတွက် အရေးကြီးလား၊ ဘယ်လောက်ထိပဲ အရေးကြီးတယ် စသဖြင့် တွေးတောပြီးမှ အချိန်ကန့်သတ်ပါ။
လူတိုင်း အလွန်စိတ်ဖိစီးတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် သင်ကိုယ်တိုင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလျော့ချ နိုင်မလဲဆိုရင်….
သင့်ရဲ့နေ့တစ်နေ့ကို စိတ်ဖိစီးမှု နဲ့စတင်လိုက်ရင် တစ်နေ့လုံး စိတ်ဖိစီးပြီး အတွေးလွန်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်မနက်စာစားရင်း စိတ်ရွှင်လန်းစေမယ့် စာအုပ်ဖတ်ရှုခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်း စသဖြင့် နေ့တစ်နေ့ကို စတင်ပါ။
သင့်ဦးနှောက်ကို ပုံမှန်အနားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ အရေးတကြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ့် အရာတွေ အတွက် အာရုံစိုက်ပြီး သေချာဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ရေး၀၀ မအိပ်ခြင်းက အတွေးလွန်ခြင်းရဲ့လမ်းစဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် တစ်နေ့အိပ်ချိန် ၈ နာရီ ရှိသင့်ပါတယ်။ အိပ်ရေးဝရင် စိတ်ကြည်လင်ပြီး ဘယ်အရာမဆို ကောင်းသောအမြင်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ သင်က ပြုလုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမှားတစ်စုံ တစ်ခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ တွေးမိနေပြီလား၊ အရေးမကြီးလောက်ဘူးထင်တဲ့ အရာတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါ တွေးမိနေပြီလား ပြန်လည်စဉ်းစားပါ။
ကဲ…… အတွေးလွန်တာတွေကို လျော့ပြီး တိုတောင်းတဲ့ ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းကြရအောင်
Thai Celebrity တွေရဲ့ official Instagram account များ
လူတစ်ယောက် ကို အဓိက ကျရူံးစေတဲ့ အကြောင်းတရား
By Ei Thandar Thet
အချမ်းသာဆုံး ထိပ်တန်းကိုရီးယား Idol (၂၉) ယောက်
လူကောင်း ဆိုသည်မှာ …
ဒီကလေးတွေရဲ့ အဆော့ကြမ်းပုံကတော့ မေမေတွေ လက်လန်စရာပါပဲ
သူငယ်ချင်းကို ချစ်သူတော်ထားရင် ဘယ်လိုတွေရှိတတ်လဲ?
Park Shin Hey ရဲ့ဒရာမာသစ်မှာ BTS ရဲ့ “Spring Day” သီချင်းလည်းပါဝင်ခဲ့
Happiness is Yellow ChiChuuuuuu 💛✨